साबुन आँखामा पर्दा किन पिरो हुन्छ ?
अप्रील 12, 2019 अप्रील 12, 2019 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments आँखा, पिरो, साबुन
साबुन हाम्रो जीवनमा दिनुहुँ प्रयोग हुने वस्तु हो । साबुन पानीले मुख धुँदा आँखामा पर्न गयो भने आँखा पीरो भई पोल्न थाल्दछ । आँखा मात्रै होइन शरीरमा कतै घाउ, चोट–पटक लागेको छ भने पनि पोल्न थाल्दछ । साबुनको प्रयोगबाट आँखा किन पोल्छ भन्ने कुरा थाहा पाउन साबुनको बनोटबारे जानकारी हुन आवश्यक छ ।
साबुनले कसरी लुगा सफा गर्छ ?
आँखा स्वस्थ राख्न ध्यान दिनुपर्ने ९ टिप्सहरु
आँखा तेजिला बनाउन खानुहोस् यस्ता खानेकुराहरु
कम्जोर आँखाको ज्योति बढाउने उपाय
साबुन तेल वा बासोजस्ता चिल्लो पदार्थ र सोडियम हाइड्रोअक्साइड अथवा पोटासियम हाइड्रोअक्साइड र क्षारहरुसितको प्रतिक्रियाबाट बनाइन्छ । यसरी चिल्लो पदार्थ र क्षारबीच प्रतिक्रिया गराउँदा त्यहाँ एक प्रकारको लवण पैदा हुन्छ । यस प्रकारको लवणलाई अम्लीय बोसोयुक्त बनाउने लवण (Salts of Fatty Acid) भनिन्छ । साबुन भनेको यस्तै प्रकारको लवण हो । हामीलाई थाहा छ कि लवण पदार्थहरु पानीमा घुल्छन्, पानीमा घुल्दा ती विद्युतीय शक्तियुक्त एकाइहरु (Electrically Charge Ions) मा टुक्रिन्छन् । यस्तो अवस्थामा यी एकाइहरु पानीको सम्पर्कमा छन् भने यिनीहरुको पानीका अणुहरुलाई आकर्षण गर्दछन् । यसबाट आयोनको वरपर पानीको मात्रामा कमी हुन जान्छ ।
यस्तै प्रतिक्रिया साबुन अनुहारमा दल्दा पनि हुने गर्दछ । हामे आँखालाई सदैव भिजाई राख्न आँखाको माथिल्लो भागमा रहेको अश्रु ग्रन्थि (Lacrimal Glands) बाट एक प्रकारको रस निरन्तर पैदा भई रहेको हुन्छ । जब साबुन हाम्रो आँखामा पर्न जान्छ, साबुनले आँखामा रहेको तरल पदार्थलाई सोसेर लिन्छ र हामीलाई एक प्रकारको असजिलो महसुस हुन्छ । यसबाहेक Fatty Acid को ऋणात्मक आयोनले पानीसँग प्रतिक्रिया गरी क्षार (Alkali) पैदा गर्दछ । फलस्वरुप आँखाभित्रको कलिलो झिल्लीलाई अप्ठ्यारो पार्दछ र झन् बढी पोल्न थाल्दछ ।
← नेपालमा पब्जी खेललाई प्रतिबन्ध किन लगाइयो ?
औषधि डोपान-डीएसआर (Dopan-DSR) र यसको प्रयोग →
बिरालोले राती कसरी आँखा देख्छ त ?
मार्च 23, 2018 नोभेम्बर 10, 2018 साइन्स इन्फोटेक 4
फिटकरीद्वारा आँखाको घरेलु उपचार
जुलाई 11, 2019 अगस्ट 27, 2019 साइन्स इन्फोटेक 2